Top 5 Chọta My iPhone ngwa ọdịnala n'ihi Android ekwentị mkpanaaka na
E nwere ọrụ dịgasị iche iche na atụmatụ nke dị n'ime ekwentị mere na mgbe ekwentị na-ezighị ọ bụ furu efu, ọ ga-adị mfe esoro. Android bụ a na-eto eto n'elu ikpo okwu na ojiji nke ngwa ọdịnala na-aba ụba a ezigbo ụzọ. E nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala dị na Google Play ụlọ ahịa nke ike-eji ịchọta na Chọpụta si na Android smart igwe na iPhone nke na-efu ma ọ bụ ezighị. A bụ ndepụta nke ụfọdụ android ngwa ọdịnala nke ike-eji soro furu efu ma ọ ezighị iPhone.
1. eri anụ Anti Izu
Na-eri anụ Anti-ezu ohi bụ ihe android ngwa nke dabeere na oru ngo a maara dị ka preyproject. Ọ bụ nnọọ ezi ngwa n'ihi na-achọta ngwaọrụ dị ka android ngwaọrụ, iPhones, windows ntị na mbadamba nke na-efu ma ọ bụ ezighị. A na ngwa dị maka ọtụtụ nyiwe na site na nke a anyị ga-enwe ike soro ihe iPhone ma ọ bụ a windows ekwentị n'iji ngwa na ihe android ekwentị. Nke a ngwa nwere pụtara ìhè nche atụmatụ. Ọ bụ 100% free. iPhone nwere ike remotely ekpochi site ngwa a. The n'ihu igwefoto na n'azụ igwefoto ike ga-eji na-foto nke onye na-eji ya na gburugburu. Anyị ga-enwe ike inwe kpọmkwem ọnọdụ nke ngwaọrụ site na iji netwọk atụmatụ. A na ngwa bụ a n'elu gosiri na ngwa na ọtụtụ ndị technology Refeyim dị ka crunchbase na TechCrunch nwere ike ikwu ngwa a. Lee ndị nzọụkwụ nke otú iji ya.
Nzọụkwụ 1. Download ngwa si ​​Google play ụlọ ahịa. Mepee ngwa na ịmepụta otu akaụntụ. Nzọụkwụ 2. Add ngwaọrụ na akaụntụ. Anyị nwere ike tinye ruo 3 ngwaọrụ na oge nke nwere ike ịbụ nke IPhone ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ na-agba ọsọ na dị iche iche nyiwe Nzọụkwụ 3. Ma mgbe anyị nbanye n'ime akaụntụ anyị ga-enwe ike ịhụ ọnọdụ na ọnọdụ nke iPhone na ngwaọrụ ndị ọzọ nke na-atụkwasịkwara ya.
2. Cerberus mgbochi na-ezu ohi
Cerberus mgbochi na-ezu ohi bụ ihe android ngwa nke na-mepụtara LSDroid. Ọ bụ ngụkọta mgbochi na-ezu ohi ngwa nke nwere a dị mfe User interface na nwere irè karị atụmatụ na ọrụ. Ọrụ ga-enwe ike ịchọta ma chọta zuru ma ọ bụ ezighị iPhones na mgbakwunye na android ngwaọrụ site na iji ngwa a. Devices ike-atụkwasịkwara n'ime nke a ngwa akaụntụ na-achịkwa remotely. A na ngwa awade ụzọ atọ iji chebe ngwaọrụ.
Site na iji ime akara technology site na ha website.
Site na iji SIM checker ọrụ
Ịchịkwa ya site n'ime ime obodo SMS ọrụ.
A na ngwa nwere oké nche atụmatụ. Ọ bụrụ na onye android ma ọ bụ iPhone efu ma ọ bụ ikpîkpu nke na-aha n'ime a Cerberus mgbochi na-ezu ohi ngwa akaụntụ, mgbe ahụ, ọ ga-agwa ọrụ. Ọ bụrụ na ndị SIM nke ọbụghị site na ọrụ na-eji na iPhone mgbe ahụ, ọ ga-agwa ndị ọrụ. Lee ndị nzọụkwụ iji ya:
Nzọụkwụ 1. Download ngwa si ​​Google play ụlọ ahịa. Ọ bụ free nke mbụ izu. Nzọụkwụ 2. Mepụta akaụntụ ma tinye ngwaọrụ na ya. Melite nche ajụjụ na ndị ọzọ nkọwa. Nzọụkwụ 3. Remotely ịchịkwa ngwaọrụ ke akaụntụ. Ọ bụrụ na ngwaọrụ na-efu ahụ na-agbalị ime Control ọrụ igbachi ngwaọrụ apụ. Rụọ ọrụ GPS na ndị ọzọ na ọrụ na nke furu efu ngwaọrụ remotely. Soro ala nkọwa site na iji ngwa website.
3. Chọta My ekwentị
Chọta My ekwentị bụ a top klas android ngwa nke a na-enwe elu larịị nche na mgbochi na-ezu ohi atụmatụ. Site na iji nke a ngwa ọ bụ nnọọ mfe soro ala na ngwaọrụ irrespective nke nke n'elu ikpo okwu na ha na iso. Na a na ngwa ọ bụ nnọọ mfe iji wụnye na ọ na-enye na ngwa ịzụrụ nke mere na ọtụtụ amara atụmatụ na-unlocked. Ọ nwere nchọgharị mma ka a iji GPS nke zuru ekwentị na ọ nwere ike mfe chọpụtara na esoro. Mụta otú iji ya:
Nzọụkwụ 1. Wụnye ngwa si ​​Google play ụlọ ahịa. A na ngwa bụ banyere 10 MB na size. Ọ bụ free na-agbalị maka otu ọnwa na mgbe na nweta nkwalite a chọrọ. Nzọụkwụ 2. Open na ngwa ma mepụta akaụntụ. Nye nche nkọwa maka nchebe nke ekwentị. Nye cell nọmba nke iPhone nke dị mkpa ka esoro gị. Ọ ekpe izipu ozi maka ihu ọma na-anabata nke a. Nzọụkwụ 3. Ozugbo ndị ozi na-mma na ọrụ na onye ga-enwe ike soro ma chọta iPhone na ọbụna bụrụ na nke ezighị ọ bụ furu efu ọnọdụ.
4. Chọta My enyi!
Chọta My enyi bụ onye na-elekọta ngwa nke na-enyekwa mgbochi na-ezu ohi ọrụ. Nke a ngwa na-enyere aka ịmata enyi na ha ngwaọrụ site na iji ọzọ ngwa atụmatụ. The ngwaọrụ na ekwentị mkpanaaka na nke a ga-esoro ga-ahụ kwukwara na ndepụta na ngwa a. A na ngwa na-eji GPS nkà na ụzụ na ngwaọrụ na-enye kpọmkwem ọnọdụ nke ngwaọrụ. Ọ bụ onye na-elekọta otu onye na ọ bụ nnọọ mfe na bara uru maka mgbochi na-ezu ohi nzube. Iche iche ngwaọrụ dị ka iPhone nwere ike mfe esoro ala. Ọ bụrụ na enyi gị iPhone efu ma ọ bụ ikpîkpu, ị nwere ike na-agbalị ngwa a.
Nzọụkwụ 1. Search na ibudata na ngwa si ​​play ụlọ ahịa. Nzọụkwụ 2. Mepụta akaụntụ. Ọ bụ free iji nke ọnwa na mgbe e mesịrị kwesịrị upgrading mgbe e mesịrị. Nzọụkwụ 3. Tinye na ngwaọrụ nke enyi anyị na ndepụta na zipu ihu ọma ozi ha. Ọ bụrụ na ha na-anabata gị ihu ọma ozi mgbe ahụ, ha na-kwukwara na ndepụta. Ọ bụrụ na ngwaọrụ dị ka iPhone na-efu nke a nwee njikọ na akaụntụ mgbe ahụ ị ga-enwe ike ịchọta ọnọdụ nke furu efu iPhone site na ngwa.
5. Nche Security & Antivirus
A bụ ihe ọzọ dị ike android ngwa nke a pụrụ mfe eji soro ala android ngwaọrụ, iPhone ngwaọrụ. Ihe mgbochi na-ezu ohi atụmatụ nke a na ngwa siri nnọọ ike. Ị ga-aka ịchọta iPhone ma mee ka ọ na-eti mkpu na-aj u na ọnụ ike olu iji dịkwuo ohere iji chọta ya. Mkpa ka ị ịmepụta otu akaụntụ a na ngwa na ịgbakwunye iPhone na ngwaọrụ ndị ọzọ n'ime ya. Nyocha ga-jụrụ na iPhone iji ejikọta ya na ngwa akaụntụ na android ngwaọrụ. Mgbe nke a ị ga-enwe ike soro ekwentị ma ọ bụrụ na ekwentị na-aba ma ọ bụ ikpîkpu. Lelee otú iji ngwa a.
Nzọụkwụ 1. Download ngwa android ngwaọrụ site Google play ụlọ ahịa. Nzọụkwụ 2. ịtọlite ​​antitheft akaụntụ ma tinye ngwaọrụ na akaụntụ. Nyocha a chọrọ maka agbakwunye ngwaọrụ Nzọụkwụ 3. Ọ bụrụ na iPhone na-efu, mgbe ahụ, apụ soro ya na iji ngwa. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ idejo ihe ị na-na iPhone, mgbe ahụ ya n'ebe gosiri na ngwa. Ọ bụrụ na ndị iPhone na-efu, ị kwesịrị ị remotely mkpọchi na hichaa ya.
> Resource> iPhone> Top 5 ngwa ọdịnala n'ihi Android ekwentị mkpanaaka na Chọta Lost iPhone